» UNkosi Ngwenyathi Dumalisile | Change SA
UNkosi Ngwenyathi Dumalisile
Ngo-2012, i-CEO ye-DGMT uDavid Harrison, yafumana ileta evela kuNkosi Ngwenyathi Dumalisile. Le leta yayiqulethe uxwebhu olumaphepha angama-31 olwalunesihloko esithi: Towards 30-Year Rural-Based Industrialisation: AmaJingqi Community Development Path. Nto leyo engatolikwa ngokuba “Lusungulo lorhwebo noshishino olusekwe ezilalini kule minyaka ingama-30 iqhubayo: Indlela ekhokelela kuphuhliso loLuntu lwamaJingqi.” Kolu xwebhu, uNkosi Dumalisile wayecacisa kwaye esandlala isicwangciso-mbono sokuzisa iinguqu kummandla i-Amajingqi, utshintshe ungabi yindawo elusizana nethwaxwa yindlala koko ube yindawo engumzekelo oqaqambileyo wophuhliso emaphandleni.
I-AmaJingqi yindawo eneelali ezili-12 ezinemizi eli-1 879. Ngokweenkcukacha zobalo-bantu lowe-2011, sisixhenxe kuphela ekhulwini sabantu abaliphumeleleyo ibanga leshumi elinambini, ize ibe yikota yabantu xa bebonke abaphumelele ibanga lesithoba. Uninzi lwabantu luxhomekeke emilanjeni ukuze lufumane amanzi, ze iikota ezintathu zabantu xa bebonke bangabinazo izindlu zangasese. Ngabantu abayi-8.4% kuphela abasebenzayo, uze wona umyinge womvuzo owamnkelwa luninzi lwamakhaya ube yimali engaphezulwana nje kwe-R1 200 ngenyanga.
Oko wathi waxhuzula imikhala, uNkosi Dumalisile uzame ukutshintsha imeko yentlalo kunye nendlela abacinga ngayo abantu base-AmaJingqi. Ngo-2015, waqalisa iprojekthi yokulima i-macadamia nexabisa izigidi zeerandi ezingama-120, eyiyeyesibini kuphela kwiphondo laseMpuma Koloni. Uqeqesho lwaqala ngo-Agasti kodwa kwathi kufika uDisemba abantu abangama-50 babe sebeqalile ukusebenza njengabasebenzi abasisigxina – betyala, belima umhlaba baze babiye neengcingo. Abo basebenza ngokusigxina bamnkela i-R2 600 ngenyanga, imali leyo ethe kratya kancinci kuleyo ingumvuzo ophantsi omiselweyo kwisizwe ngokuphathelele kwicandelo lezolimo. Le projekthi ekugqibeleni iza kusebenzisa umhlaba oziihektare ezingama-300 kwaye idale nezithuba zemisebenzi ezikwangama-300 – uchintsi wemali kunye nezakhono eziza kutshintsha kakhulu indlela le ngingqi ephila ngayo. Kuye kwadaleka neminye imisebenzi eli-142 ngenxa yentsebenziswano neSebe leMicimbi yezaManzi kunye neleMicimbi yezeNdalo, kucocwa amanzi futhi kugecwa nezityalo ezingezonkulelane.
INkosi ikwawubeke esweni nomba wokuphucula imfundo, ukufikeleleka kolwazi kunye nezempilo. Ukususela ngo-2013, sele kwakhiwe futhi kwabhaliswa amaziko ompeleso nokhuliso asithoba amatsha, kwaye kungoku nje abantwana abangama-217 bafunda kwezi zikolo. Izikolo ezisibhozo ezikulo mmandla ngoku zinamathala eencwadi amancinci, zona ezithathu kuzo zinamaziko okusebenzisa ii-iPad. Abantu abatsha balapha bathatha inxaxheba kwimidlalo engeyonxalenye yezifundo zesikolo nequka amaqela okufunda nawebhola ekhatywayo, noninzi lwabo olufumene uqeqesho oluthe xhaxhe ukuze bakwazi ukufundisa abanye ngokusebenzisa iikhompyutha. Oomama balapha bangene kwimizi engama-1 449 ukuya kuvavanya ukubona kwamehlo bahlole nomlanga emehlweni; kwisithuba nje esingunyaka, abantu abangama-28 baye bongulwa amehlo baze babona, baze bona abangaphezulu kwama-300 bafumana izipeksi zamehlo. Umzi weNkosi wona, owaziwa njengeKomkhulu neBhotwe, uneziko lolwazi nelingumahamba-nandlwana lokunyusa iibhetri zeeselula apho abahlali banokukwazi nokusebenzisa i-intanethi futhi baprinte nezinto zabo khona. Unkosikazi weNkosi, uNomathamsanqa – yena ofundele ubutitshalakazi futhi ikwanguye nophethe iiprojekthi zemfundo – nguye ophethe umsebenzi wokwakhiwa kwethala leencwadi apho abantwana bakwaziyo ukufundela ukuzonwabisa, ukudlala kwanokukrema.
Yintoni eyakubangela ukuba ugqibe kwelokuba mawuphakame uqalise ngalo msebenzi? Wachukunyiswa yintoni ukuze ushukume?
“Ndabekwa kwesi sikhundla ngo-2010. Ndaye ndaqala ukujonga imingeni uluntu lwalapha olujongene nayo. Sele siyifincile iminyaka engaphaya kweshumi ukusukela oko lo mbuso ukhoyo wathatha iintambo zolawulo. Zonke iipolisi ezikhoyo zinyathela umba wokuphuhliswa kwabantu abangathathi ntweni, kodwa noko kunjalo imeko yabantu bakuthi iya isiba maxongo. Abantu baphuncukana nezimilo. Ngoku sikwazwe apho nabafazi bacabayayo. Imali-sibonelelo karhulumente imnke nezidima zamadoda.
“Ndaye ndaqwalasela nemithetho ekhoyo. Umthetho uthi njengeenkokeli zemveli, kufuneka siqwalasele – phakathi kwezinye izinto – iindlela esinokuphuhlisa ngazo iilali zethu. Akukho mali ibekelwe bucala ukwenza lo msebenzi. Loo nto ithetha ukuba kufuneka uhambe unkqonkqoza kuyo yonke iminyango namaqoqo karhulumente. Kufuneka uhambe ucela inkongozelo nakwamanye amaziko, ungqibe, ucela kubantu ababelwe imali yokuba benze le misebenzi.”
Njengokuba ziyinqwaba engaka nje izinto owawunokuzenza – wazikhetha njani ezi uzenzayo ngoku?
“Uhlobo loqoqosho loMzantsi Afrika lusekelwe ezidolophini nakwimizi-mveliso. Abantu bacinga ukuba uya kuthi ukuze ube yinto ebomini uqale uziphucule ngokohlobo lwasedolophini. Ukuba ungumntu ofunde ezilalini, into yokuqala efika ezingqondweni zabantu kukuya ezidolophini. Le ndlela yokucinga kufuneka itshintshe, kuba ezidolophini abantu ngoku abasebenzi futhi bathwaxwa nayindlala. Abantu mabazivulele amathuba emisebenzi kwiilali ezi zabo. Kodwa kufuneka siwumele ngeenyawo umba wokufundiswa kwabantwana bethu ukuze sikwazi ukuwulwa lo mngeni.
“Ndithi phantsi ngokufudukela ezidolophini. Ndifuna ukufundisa abantu bale ngingqi yethu ukuba ezi lali zethu ayiyondawo yokuhlala nje kungenziwa nto. Kufuneka siyitshintshe ibe ngummandla othile woqoqosho.
Oko kwasenza ukuba sikhangele ubutyebi bendalo obukhoyo kulo mmandla. Imilambo engatshiyo enkcenkcezayo ukuya kungena elwande, ulwandle olu ngokwalo, imozulu. Ilanga likaThixo eligqatsa imihla nezolo, kwabo bacinga amathuba amandla ahlaziyekayo; umoya ophephezela imini nobusuku. Sathi sakubona obu butyebi bungaka sacinga ukuba siye kwiSebe lezaMandla ukuba lize apha lize kusinceda, nangona nje kusekho ukuziziliza kulo mba ngokwangoku.
Umhlaba wethu otyebileyo unxuse imilambo. Ukuba awunamhlaba mkhulu, uye ukhethe izilimo ezingafuni mathafa makhulu amasimi zibe zona zithwala ukutya okuninzi. Thina senze kanye loo nto – ukulima uhlobo lwamandongomane okuthiwa yi-macadamia olusisilimo esingafuni mhlaba mkhulu kodwa sibe sithwala ukutya okuninzi. Sathatha ngokuya nje eNcera [eyiyifama yokuqala eMpuma Koloni ukulima i-macadamia eza kuthengiswa] sathi, ‘Nathi siyaluthanda olu hlobo lwesilimo’, baze eNcera bathumele ingcali yabo yoqoqosho lwezolimo ukuze ize kuhlola umhlaba wethu, ukujonga ukuba uza kukulungela kusini na ukulima i-macadamia. Yabuya impendulo isithi ukulungele ngenene.
“Oku kwakhokelela ekubeni sakhe ubudlelwane ne-Services SETA. Saye sanikwa imali ezizigidi zeerandi ezingama-20 ukuze siqeqeshe abantu kumacandelo ahlukeneyo, kuqukwa nelokuphuhliswa kwamashishini abantu abaziqalela ona. Sifuna le mali ingaphumi kule ngingqi. Xa abantu befumana imali, kufuneka bengayanga kuthenga ngayo kuGatyana kwaBoxer, kwaShoprite, okanye kwaPick ‘n Pay. Kufuneka le mali ijikeleze apha.
“Kodwa sakuba sibhibhidla nje amazinyo ukuba siya kuthi abantu ‘mabathenge ngayo kwalapha kule ngingqi’ imali yabo phofu kube kungekho zinto banokuzithenga. Kufuneka sicele i-dti ukuba isakhele iziko lokuthengisela iivenkile noosomashishini abakhulu ngokwezinto ezithandwa nezithengwa ngabantu bale ngingqi. Athi amaciko induku entle ikhiwa ezizweni. E-Indiya, benza imali yaphaya, i-rupee, ukuba kuthengwe ngayo izihlandlo ezithandathu kwilali nganye phambi kokuba iphumele ngaphandle. Nathi sizama ukwenza oku kanye.
Ungakhe usichubele, usicacisele ngenkqubo yokwenza into uyenzela isizwe noluntu ngokubanzi – abantu baye bathini, wakwazi njani ukuchukumisa umdla wabo batsho nabo bathatha inxaxheba, ingaba wena oku kwakuchaphazela njani kwaye yintoni ekubangela ukuba uzingise kangaka?
“Ndaye ndabona ukuba iinkokeli zethu ngoohlohlesakhe. Ke ngoko ngelo galelwana, kwesi sithilana sethu samaJingqi, ndaye ndazixelela ukuba mandithathe eli thuba ndibonise abantu izinto zamehlo.
“Ngethuba ndithetha noluntu lase-AmaJingqi ndaye ndathi, ‘Andizikuba yinkosi yenu. Ndiza kuba sisicaka senu. Ndiza kuva ngani emandikwenze. Azinqasheli zingakhange ziyokuhlangula.’ Abantu basuka bandihleka. Babengayiva kakuhle le nto ndandizama ukuyithetha. Bona into abayaziyo kukuba ‘Umntwan’egazi akanakuba sisixhwitha-ntamo esisisicaka sabantu.
“Akululanga xa ungenaziprojekthi zikungenisela imali. Oku ungakulanda ukuse kwixesha langaphambili lobukholoniyali – apho kwatyhuthulwa kuhluthwa yonke into enexabiso kuthi, iimfazwe zokulwela umhlaba zemka nabo bonke ubutyebi bethu. Ngoku siqala phantsi. Noko kunjalo, ndithi mna ‘Masinganxubi. Masivuke sizenzele. Masibuyisele isidima sethu kuthi. Nam ngoku ndimaxhaphetshu ndizama ukwenza loo nto.
“Ngokuye kuhamba ixesha, abantu baye babona ukuba le nkosi iyalufumana uncedo. Abantu bathontelana ukuza ngaphambili. Bafuna ukuba yinxalenye yenkqubela. Yile nto kanye ke uyibonayo ngoku.
Lo msebenzi ungaka uthetha ntoni kuwe wena buqu, kwaye ucinga ukuba abantu base-Amajingqi bavune ntoni kuwo?
“Sisaqingqa apha. Le ndawo yase-Amajingqa ndifuna ukuyisebenzisa njengendawo yokufukamisela. Xa siqonda ukuba iimbiza zivuthiwe, siza kuya ebantwini sithi, ‘Yizani ke ngoku nize kubona ummangaliso’. Sitsho sibaxelele ukuba senze njani, sikubethelela nokuba khange kube lula konke. Sasihamba singena kwiminyango ngeminyango sifuna amancedo ngenxa yobunzima beengxaki ebesihamba sigagana nazo.
“Amazinga entswela-ngqesho ehlile. Ngoku siza kuvuna iziqhamo zoqoqosho esezibonakalisa ukuvuthwa. Amazinga olwaphulo-mthetho nawo ayehla.
“Abantu nabo baswabulukile. Babekade bebonakalisa ukuphelelwa lithemba, kodwa ngoku elaa themba, nalaa moya wodlamko uvuselelekile.